Faroole Oo Aqbaly La Kulanka Musharraxiinta Bal Madaxtooyada Ha Arkeen Si ay Xiinka Usii Badiyaan * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa manta aqbalay baaq ay shalay ujeediyeen musharraxiinta doonaya iney 8-da bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2014 kula tartamaan xilka madaxweynaha.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta magaalada Garowe saxaafadda kula hadley ayaa sheegay in uu soo dhaweynaayo shirkaas ay ku baaqeen musharraxiinta, wuxuuna xusay inuu isaguba qorsheynayey inuu shirkaas iclaamiyo.
Wuxuu sheegay Faroole in haddii musharraxiintu kala hormareen ku dhawaaqidda shirkaas uu sood soo dhaweynaayo, islamarkaana diyaar u yahay in la wada hadlo.
“Dabcan aniguba waan ku talo jirey in aan shirkaas qabto, waan soo dhaweynayaa haddii ay igala hor mareen, waxaana diyaar u ahay in aan la kulmo walaalahay, markii ay magaalada ku soo dhamaadaan badankood, laakiin shirku waxa uu ka dhacayaa Madaxtooyada, bal madaxtooyada ha arkeen si ay xiinka u sii badiyaan” ayuu yiri Madaxweyne Faroole.
Faroole wuxuu shaki geliyey in kulanku dhici karo maalinta sabtida ah, kaasoo musharraxiintu iclaamiyeen, wuxuuna xusay in musharraxiin badan weli ka maqan yihiin magaalada Garowe ee la doonayo in kulanka lagu qabto.
Qaar kamid ah Musharixiinta xilka Madaxweynaha ee Puntland oo sheegay iney wakiil ka yihiin kuwa kale, ayaa maalintii shalay saxaafadda kula hadley Garowe waxeyna usoo jeediyeen madaxweyne Faroole in la kulmo, iyagoo sheegay in kulanku sabtida oo beegan 14.12.2013 ka furmayo xarunta PDRC ee magaalada Garowe.
Musharraxiinta ayaa sheegay in shirkaas looga arrinsanayo sidii Puntland ay uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay, waxeyna casumaad rasmi ah u geeyeeen Madaxweyne Faroole.
Madaxweyne Faroole iyo musharraxiinta ayaa isku khilaafay guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta dastuurka, iyadoo guddigaas oo Faroole magacaabay kana koobnaa 8 xubnood, musharraxiintu ka daba magacaabeen 8 xubnoo oo kale oo iyagu soo culeen.